ဆုံဆည်းရာ ဆုံဆည်းရာ ဘလော.မှ ကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ
ဒီဘလော.ကို သူငယ်ချင်းများနဲ.စုပေါင်းရေးခြင်းသာဖြစ်ပါတယ် ဆုံဆည်းရာဘလော.မှ ကြိုဆိုပါတယ်လာရောက်လည်ပတ်သောသူငယ်ချင်းများကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျွန်တော့်တို.ဆိုဒ်မှ ကူးယူတင်ပြသော ဘလော့များအား ဆိုဒ်လိပ်စာထည့်သွင်းဖော်ပြပေးပါ ရန် မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်
အထပ်ထပ် တက်နေတဲ. ခေတ်
ဖြူးကောင်လို ထောင်နေတဲ. ဆူးတွေ
မထိ မိအောင် ရှောင်နေရတဲ. ခေတ်
ကိုယ် အလုပ် ကိုယ်လုပ်ပြီး
ကိုယ် လျှောက်တဲ. လမ်း မှန်တယ် လို.
ယူဆ နေတဲ. ခေတ် ကိုယ် သွားဖို.
သူများ လမ်းကိုယ် ပိတ်
ထိုင် ခုံ လု ထိုင်နေတဲ. ခေတ်
အမှန် တရား ကိုယ် အင်အား နဲ.လဲ
အပြုံး တွေ နဲ. နောက်ကျော က
ဓါး ထိုးနေတဲ. ခေတ်
ခေတ် က ပျက်နေတာ လား
ကိုယ် က ပဲ မှားနေတာလား ။
မှုပိုင် ghostvampire အချိန် 9:13 AM No comments:
IT ခေါ် ကွန်ပျူတာ နည်းပညာ ဆိုတာ
အခုလက်ရှိ ခေတ်သစ်နည်းပညာ စီပွားရေးလောကတွေမှာ အသက်မွှေးဝမ်းကျောင်းအလုပ် တွေကို လုပ် ကိုင်နေရတာ အတော်ကိုပင်ပန်းပြီး ခေတ်ဟောင်းစက်မှုစီးပွားရေးစနစ်တွေနှင့် နည်းစနစ်တွေ တော်တော်ကိုကွာခြားလာတာကိုတွေ့ရလို့ ဒီစာကိုရေးသားလိုက်ရပါတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ နည်းပညာနယ်ပယ်ဆိုတာက လူတွေရဲ့ Manpower ဆိုတဲ့ လူအင်အား စွမ်းအားတွေကို နေရာတော်တော် များများမှာ အသုံးချလာကျတာကိုတွေ့ရပြီး အလုပ်တခု သို့မဟုတ် Project တွေနှင့် အချိန်ပိုင်းအလိုက် အချိန်မှီပြီးစီးအောင် လူစွမ်းအားတွေအပေါ် မတရားဖိနှိမ့်ပြီးလုပ်ခိုင်းတဲ့ စနစ်တခုအနေ နှင့်တွေမြင်လာရပါ တယ်၊ ဒါတွေကြောင့်လဲ အောင်မြင်တဲ့စီပွားရေးစနစ်တခုအဖြစ်ရပ်တည်နိုင်လာရတာပါဘဲ၊ (ဒါတွေကြောင့် ပွဲစားလုပ်စားတဲ့စကာင်္ပူစီးပွားရေးအောင်မြင်လာရာတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းလေးပါဘဲ၊ ဒါကကျွှန်တော်ရဲ့ အမြင်တခုလေးပါ၊)
ဒီ (၁၀) ချက်ပြည်စုံရင် ကွန်ပျူနည်းပညာလောက မစွန့်ခွာသင့်ပါ ဘူး!
ကွန်ပျူတာနည်းပညာသမားတွေ တခါတရံမကျေမနပ် စိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့ ( Stand By Jobs ၂၄နာရီအလုပ်ချိန်) သူတို့ရဲ့ကွန်ပျူတာနည်းပညာအလုပ်တွေပါတဲ့၊ ဒါပေမဲ့ အကယ်၍ အားလုံးသော အမှန်တကယ် ကွန်ပျူတာအသက်မွှေးဝမ်း ကျောင်းနှင့်အလုပ်မလုပ်နေသူတွေကို မဆိုလိုပါဘူးတဲ့?
မှုပိုင် ghostvampire အချိန် 8:47 AM No comments:
အညွှန်း web နည်းပညာ, ဆောင်းပါး
Software သုံးစရာ မလိုပဲ မိမိ IP ကိုယ် ဖျောက်ခြင်း
ကျန်တော် ဆီ မှာ IP Hide and Real Hide ip ဆိုတဲ. software တွေ ရှိပါတယ် ဒါပေမဲ. ဒီ
software တွေသုံးရတာ ကျန်တော် တို. လိုင်းကျ သွားတက်ပါတယ် လိုအပ်တဲ.အချိန် လောက်ပဲ
သုံးရင် ပိုကောင်းတာပေါ.ဗျာ ဘယ် လို အချိန် မျိုး သုံးရင် အဆင် ပြေမလဲ ဆိုတော. ကျန်တော်
မှုပိုင် နေဇော် အချိန် 2:17 AM No comments:
အညွှန်း web နည်းပညာ
" FaceBook တွင်ပေါ်သော Message "
မှုပိုင် နေဇော် အချိန် 8:30 AM No comments:
MD5CRACK WEDSITES
ဒါ က တော. HACKER ကြီးများ သိပီး ဖြစ်တဲ. md5cracker sites တွေပါပဲ ဘာတွေလုပ်လဲ ဆိုတော.
website တွေ sql ကြောင်.ပေါက်တဲ.အချိန် Mail တွေ မြင်မကောင်းအောင် တွေ.ကြရပါတယ် ဒါမျိုးဆို ဒီ
md5 လေး က ကူညီ ပေးပါ မယ် ပေါက်နေတဲ.ဆိုက် တွေ ဘယ်လို မြင် အောင် ကြည်.ရမလဲ ဆိုတာ
ကတော. Dorker တွေ ကို မေးကြည်.ပေါ.ဗျာ ဟိဟိ
မှုပိုင် ghostvampire အချိန် 8:44 AM No comments:
အညွှန်း Crack, Hack, MD5
ဖုန်း virus သတ်တဲ.apk
ဒီ Apk က ဖုန်းမှာ Virus ရှင်းပီး မြန်အောင် လုပ်ပေးပါတယ် ဖုန်းတိုင်းမှာ ရှိလဲ ရှိသင်.ပါတယ်
ထွက်တာတော.ကြာပီပေါ. သုံး ကြည်.ပါ သုံးရတာ လည်း လွယ်ကူပါတယ် သူက virus
scan ရော junk files clear ရော လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်
မှုပိုင် ghostvampire အချိန် 1:44 AM No comments:
အညွှန်း mobile download
Browser မရှိလဲ Website ကြည်.မယ်
ကျန်တော် တို. Computer မှာ browser software မရှိလဲ website တွေကို window မှာ အသင်.ပါတဲ.
Tool တွေနဲ.လဲ ကြည်.လို.ရပါတယ် ဟီး ဒါပေမဲ. ကျန်တော် တို. Browser တွေနဲ. သုံးသလိုပုံစံ
မျိုးတော.မရဘူးပေါ. ဥပမာ ဗျာ website တွေ အများ ကြီး ဖွင်.လို.မရဘူး open link atanew tab
တို. download ဖို.မလွယ်ကူ တာမျိုးပေါ. youtube . google .facebook စသဖြင်. တခုခြင်းစီ ဖွင်.ကြည်..
စမ်းသပ်နိုင်ပါတယ် အောက်မှာ ဖွင်.နည်း ထပ်ပြော ပြထားပါတယ် စမ်းကြည်.ကြပေါ.
မှုပိုင် ghostvampire အချိန် 9:39 AM No comments:
ကြိုက် နှစ်သက်ရာ background လေးနဲ. ကြည်.နိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ
ပိဋ္ဋကက် ၃ ပုံမြန်မာပြန် PDFဖြင့် Download
g take (7)
mobile download (11)
web နည်းပညာ (15)
ဘာသာရေး စာပေ (3)
လှည်.စားသော ပြောင်းလဲ မှု.များ (1)
လှည်.စားသော ပြောင်းလဲ မှု.များ (၂) (1)
မန်ဘာ ၀င်ပေးတဲ.အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ
ကိုယ်ကျန်းမာလို.စိတ်ချမ်းသာပါစေလို. ကောင်းကင်လေးဘလော.မှ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ် နော် သူငယ်ချင်း
C-box မှာ အမှာစာ ရေးမယ်ဆိုရင်တော.ဘေးမှာ ရှိပါတယ်
ရေးသားပြီးသမျှ August (3) July (14) June (7) February (27) January (6) December (24) November (7) October (22) September (16)
တားရော. ဗေဒင် မေး၇အောင်
၀ ကန် လူ.ကန် စမ်း ကြမယ် ကွာ ယုံ ကြည် လို.ပဲ ဖစ်ဖစ် အပျင်းပြေ ပဲဖြစ်ဖြစ် ပေါ. တား ရော. ဗေဒင် လေး စမ်းကြည်.ရအောင်ဒီ ဆော....
youtube က Video ကို ဆော.၀ဲဒ် မသုံးပဲ ဒေါင်းရအောင်
ပထမ ဆုံး အနေ နဲ. you tube site ကို ၀င် ကြည်. လိုက် ပါ ပြီး ရင်တော. ကိုယ် download လုပ် ချင် တဲ. သီချင်း ကို ရွေးပြီး ဖွင်.လိုက်ပေါ. ...
ဘလော. ကို အလှဆင် ရအောင်
ကိုယ် ဘလော.မှာ kDDI သီချင်း လေး နဲ. မြူ နှင်းတွေ ဝေ ချယ် ရီ ပန်း တွေ နဲ. ကိုယ် ဘလော.လေး ကို ပုံစံ တမျိုး ပြင် ချင် သော သူငယ်ချင်း...
ဒါလေးက facebook က ကိုယ် ရဲ. အချက် အလက် တွေ ကို ဘယ် လို download လုပ် ရမလဲ ဆိုတာ သိချင် ကြသော သူများအတွက် ပါ
facebook video ကို ဘလော.မှာ တင်ရအောင်
ကျန်တော် တို.ဘလော.မှာ youtube ကနေ video ကို တင် တာ ဖေ.ဘုတ် က video တင်တာတွေ ကို အားလုံး က သိပြီး သား လို.တော.ထင်ပါတယ် မခက်ပါဘူး နော်...
VOA ရုပ်/သံ အပတ်စဉ် တီဗွီမဂ္ဂဇင်း မြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းများ
ယနေ့အစီအစဉ် - တပတ်အတွင်း မြန်မာ နဲ့ နိုင်ငံတကာ ထိပ်တန်းသတင်းများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ နဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း၊ မြန်မာသတင်း လွတ်လပ်ခွင့် တိုးတက်မှုရှိလာကြောင်း Freedom House ပြော၊ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူများအကြောင်း သက်တန့်ရောင် သတင်းလွှာ .....
မှုပိုင်- ကောင်းကင်လေး. Picture Window theme. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.